War Xasaasiya:Dawlad Ay Hore Somaliland Xidhiidhka Ugu Jartay Oo Ciidamadii Ugu Badnaa Ka Qaadanaysa Somaliland .
Sunday February 11, 2018 - 16:00:43 in Wararka by Halgan News
Hargeysa (Halgan) Mid kamid ah dawladdaha ay Somaliland hore u sheegtay inay xidhiidhka u jartay ayaa bilawday inay Somaliland ka qaadato ciidamo aad u tiro badan oo ku biiri doona ciidamada dawladaasi.
Dawladda Dalkaasi Qatar ayaa bilawday inay dhalinyaro aad u tiro badan ka qaadato Somaliland, iyada oo dhalinyaradaasi u tabobari doonta Ciidan ahaan, kuna biirin doonta ciidamada dalka Qatar.
Dawladda Somaliland ayaa markii ugu horeysay maanta ka hadashay arrintaasi, iyada oo aanay hore uga hadal, waxaana ka hadashay wasiiradda Shaqo Gelinta iyo Arrimaah Qoyska Hinda Jaamac Gaani.
Dhalinyaraddan ayaa bilihii ugu dambeeyey ka dhoofaayey dalkan Somaliland, iyaga oo u socdaalaayey dalkaasi Qatar, waxaanay dhalinayaraddani ku dhoofayeen Basaboorka dalkaasi Somaliya oo ah ka keliyaata ee laga aqoonsan yahay dalkaasi Qatar.
Hoos Ka Daawo Warkan Muqaalkisa.